Wac Taageero 86 + 18008724076
Taageerada emaylka naqshadeynta2020@vip.163.com
Nidaamka Qaab-dhismeedka Birta
Dhismayaasha Sare u kaca
Nooca warshadda wax soo saarka warshadaha
Fasalka qaab dhismeedka xuubka
Qaab-dhismeedka Net, Fasalka Qaab-dhismeedka Jinsiga
Dhismaha qorshaha biyaha iyo korontada
Fasalka Meelaha Birta ah
Muuqaalka Qeyb Soosaarka Warshadda
Hordhaca qalabka: Astaamaha farsamada iyo ikhtiraaca: SKHZ-B xakamaynta tirada H-mashiinka isku-xidhka H-beam 1. Habka wax soosaarka ee alxanka H-beam waa in la dhigo H-beamka iyadoo la raacayo qaabka "I", iyo alxanka laba geesood. labada dhinacba waqti isku mid ah, oo sidaas si weyn u kordhinaya waxtarka alxanka. Sababtoo ah alxanka isku dhejisan, saxanka websaydhka asal ahaan ma rogrogo alxanka ka dib. 2. Habka toosinta mashiinka toosinta tooska ah ee H-beam ...
Codsiga alaabada shirkadda
Codsiga wax soo saarka shirkadda Astaamaha qaab-dhismeedka birta: 1. Awoodda maadada sare iyo miisaanka khafiifka ah ee birta ah wuxuu leeyahay awood sare iyo is-beddel laastik ah. Marka la barbardhigo la taaban karo iyo alwaax, saamiga cufnaanta si loo dhaliyo xoog waa yar tahay, sidaa darteed isla duruufaha isku midka ah, xubinta xubinta qaab-dhismeedka birtu way yar tahay, miisaanka dhintana waa fududahay, gaadiidka iyo rakibaadduna waa ku habboon yihiin, iyo qaabka birta wuxuu ku habboon yahay qaabdhismeedyo leh taako ballaaran, dherer sare iyo loa culus ...
Hordhac Xoojinta hagida iyo xakamaynta waaxda karti u leh ee qorshaynta magaalooyinka iyo miyiga ee ku saabsan isticmaalka dhulka ay dawladu leedahay iyo nashaadaadka dhismayaasha kaladuwan ayaa ku haboon kor u qaadida isticmaalka dhulka iyo mashaariicda dhismaha ee kaladuwan si loo waafajiyo himilooyinka horumarineed iyo shuruudaha aasaasiga ah ee ku xusan. qorshuhu, isagoo markaa bixinaya dammaanad qaadka xaqiijinta guud ahaan qorshaynta magaalooyinka iyo miyiga, qaabaynta caqliga leh, dhowrista dhulka, horumar degdeg ah oo waara. Plannin ...
Hordhac ay ka mid yihiin dhismaha biyaha (dhismaha biyo bixinta iyo sawirka dhismaha bulaacada) iyo dhismaha korantada (dhismaha sawirka dhismaha korantada), oo si wada jir ah loogu yeero sawirka biyaha iyo korontada. Dhisida biyo bixinta iyo sawirka dhismaha dheecaanku waa mid ka mid ah qaybaha hal mashruuc oo mashruuc injineernimo ah. Waa aasaaska ugu weyn ee lagu go'aaminayo kharashka mashruuca iyo abaabulka dhismaha, sidoo kalena waa lama huraan ...
Hordhac Cutubyada aasaasiga ah ee ka kooban shabakadda ayaa ah koon, saddex geesood leh, cabira, saddex jibaar goobeed, iwm. Cutubyadan aasaasiga ah waxaa lagu dari karaa trigon, afargeesle, lix geesleyaal, wareegyo ama qaab kale oo qaab qorshe ah. Waxay leedahay faa'iidooyinka culeyska booska, culeyska fudud, qalafsanaanta ballaaran, waxqabadka dhul gariirka wanaagsan, iwm. Waxaa loo isticmaali karaa saqafka jimicsiga, shineemada, hoolka bandhigga, hoolka sugitaanka, shiraac istaagga garoonka, hangar, laba dhinac qaab dhismeedka iyo ...
Hordhac Qaab dhismeedka xuubku waa isku-dhafnaan qaab-dhismeed iyo qaab-dhismeed. Waa nooc qaab-dhismeed cidhiidhi ah oo adeegsada qalabka xuubka jilicsan ee xoogga badan iyo qaab-dhismeedyada kaabayaasha ah si loo soo saaro culeys maskaxeed oo gaar ah oo dhexdooda ku jira hab gaar ah wuxuuna u sameeyaa qaab gaar ahaaneed oo ka hooseeya xakameynta culeyska fekerka, kaas oo loo isticmaalo qaab-dhismeed daboolaya ama dhismaha jirka ugu wuxuu leeyahay adkeyn ku filan oo uu iskaga caabiyo culeyska dibedda. Qaab dhismeedka xuubku wuxuu jebiyaa qaabka naqshadaha toosan ee toosan ...
Hordhac Qaab dhismeedka steel waa qaab dhismeedka inta badan ka samaysan bir iyo waa mid ka mid ah noocyada waaweyn ee dhismayaasha dhismaha. Qaab dhismeedku wuxuu leeyahay awood sare, miisaan fudud iyo qalafsanaan sare, sidaa darteed waxay si gaar ah ugu habboon tahay dhismaha dhismayaal baaxad weyn, heer sare ah oo aad u culus. Maaddadu waxay leedahay isku-midoobid iyo isotropy wanaagsan, waxaa iska leh jirka laastikada ku habboon, waxayna aad ugu habboon tahay fikradaha aasaasiga ah ee makaanikada guud ee injineernimada. Maaddadu waxay leedahay baaxad wanaagsan iyo adadag, ...
Hordhac Warshadda warshadaha waxaa loola jeedaa dhammaan noocyada guryaha ee sida tooska ah loogu isticmaalo wax soo saarka ama taageeridda wax soo saarka, oo ay ku jiraan aqoon isweydaarsiyada waaweyn, guryaha kaabayaasha ah iyo xarumaha gacan qabashada. Dhammaan dhirta ku jirta warshadaha, gaadiidka, ganacsiga, dhismaha, cilmi baarista sayniska, iskuulada iyo qeybaha kale waa lagu dari doonaa. Aqoon isweydaarsiga loo isticmaalo wax soo saarka ka sokow, warshadda warshadaha waxaa sidoo kale ku jira dhismayaal ku-meel-gaar ah. Dhirta warshadaha waxaa loo qaybin karaa buil warshadeed hal-dabaq ah ...
Shiinaha Zhenyuan Steel Qaabdhismeedka Engineering CO., LTD waa qandaraasle qaab-dhismeedka steel xirfadeed isku dhafka design, soo saaridda iyo rakibaadda.
Cinwaanka: Tianjin iyo Yunnan, Shiinaha
Telefoonka: 86 + 18008724076
WeChat: hayaa 532129
Xiriir: Mudane Lin
Saacadaha shaqada (waqtiga Beijing): 8:30 ~ 18:30